Kutheni le nto iapile ikhuphe i-iphone ye-2020 ngexabiso 'ukusuka kwi- $ 229'? amaqashiso okuthanda nokuchitha ngaphezulu ...
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Kutheni le nto iApple ikhuphe i-iPhone SE ye-2020 enexabiso 'ukusuka kwi- $ 229'? Ukuphulukana nothando kwaye nangaphezulu kunokuchitha ...
Kutheni le nto iApple ikhuphe i-iPhone SE ye-2020 enexabiso 'ukusuka kwi- $ 229'? Ukuphulukana nothando kwaye nangaphezulu kunokuchitha ...
I-iPhone SE entsha ye-2020 ijongeka njengesiko esenzelwe amaxesha e-coronavirus. Ukusasazeka phakathi kwexabiso layo, kunye ne-iPhone 11 Pro Max ebiza kakhulu kuluhlu kuyinto enkulu kunaleyo yayiyiyo xa kwaziswa i-OG SE. kwaye yeyona iPhone ifikelelekayo kubudala.
I-iPhone SE 2020 yexabiso eliphantsi kunokuba ijongeka ngamaxabiso asemthethweni, jonga nje kuluhlu lwezinto ezinokuthengiswa:
I-Apple iPhone SE- $ 30
I-Apple iPhone 6- $ 30
I-Apple iPhone 6 Plus- $ 50
I-Apple iPhone 6s- $ 80
I-Apple iPhone 7 Plus- $ 150
I-Apple iPhone 8- $ 170
I-Apple iPhone 8 Plus- $ 250
Njengoko ubona, olona phuculo lubonakalayo- ukusuka kwi-iPhone 8 -yokufumana i-170 yeedola ukuya kwi-tag ye-399 ye-SE 2020, ikushiye ne-229 $ epokothweni. Elo kanye lixabiso lokuqala elithengiswa ngu-Apple kumfanekiso wentloko, esazi kakuhle ukuba uninzi lwabanini be-iPhone 8 baya kuhendeka ngoku njengoko uthotho lwe-8 luyekile. Yongeza unyaka kunye neapos yexabiso le-Apple TV, kunye ne-iPhone SE 2020 ngequbuliso yehla iye kumanqaku angenakuphikiswa ayi-169.
Cwangcisa kwangaphambili iApple iPhone SE 2020
Ukucaciswa kwe-iPhone SE 2020 kuyenza ukuba ibe sisiyobisi esisesangweni kwi-iOS 14
Ngaphezulu kwelo, i-iPhone SE 2020 ibonelela ngaphezulu kakhulu kokugqibela kwe-iPhone 8 encinci nokuba ayisihlekisi. Ixhaswe yiprosesa efanayo ekwi-iPhone 11 Pro Max, ifowuni iya kuhlala ilungile kwiminyaka ezayo.
Ezi fowuni ze-5G zisenokuba yiyo yonke ingqumbo ngoku, kodwa akukho nkxaso yenethiwekhi, kwaye iApple iyakuhleka yonke indlela eya ebhankini kuthathelwa ingqalelo ukuba i-iPhone SE 2020 ibiza ecaleni kwento ukudibanisa iindawo ezithile, kwaye imida yayo isenokwenzeka iipesenti ezingama-200-300.
Ngaphandle kwengeniso yezinto eziyilwayo, iApple iyakwandisa kakhulu isabelo sayo sentengiso kwihlabathi lonke ngamaxesha apho ukuthengisa ngefowuni kuthathe into ngenxa yesifo secoronavirus. Ngeso sabelo sentengiso siza kunyuka okukhulu ekufikeleleni kwiinkonzo zokubhaliselwa, nazo.
I-iPhone SE 2020-ixabiso eliphantsi nelithandwayo njengesiyobisi esangweni
Iivenkile ezintsha zeApple & apos kumxholo nakwimithombo yeendaba zinokuqala ukubhatala ngokuchanekileyo nge-iPhone SE 2020. Kunyaka ophelileyo, ngephanyazo elinye, iApple yathatha ikhebula kunye neNetflix ngejelo le-Apple TV kunye ne-TV + yokubhalisa. Ukusasazwa komdlalo kunye neqonga lokusasaza njengeStam okanye uGoogle kunye neeapos ezizayo zeStadia zijongana neArcade yesiqhelo kodwa eyoyikisayo. Abahlanganisi beendaba kunye nabapapashi abazimeleyo ngoku banelinye iqonga elinokubakho lokujonga- Iindaba +.
Akukho nanye kwezi nkonzo zintsha zeApple ezinokuthatha abadlali abazinzileyo okwangoku. Ngelixa Iindaba + zinokukunika ukufikelela kwiimagazini ezingama-300 +, eyona ikwazileyo ukuyisayinisa yayiyi-LA Times kunye ne-WSJ- ayisiyiyo le buffet yeendaba ibikulindele abantwana bayo abatsha. I-Ditto yeqonga lokudlala i-Arcade, kunye ne-TV + yesiqulatho sokuqala sevidiyo. Amanani abaqale ngawo kukude kakhulu kukhuphiswano olwenziweyo emasimini.
Ngokunika imirhumo kude neefowuni ezintsha, nangona kunjalo, iApple ilungiselela intsimi njengomthengisi eqala abathengi bakhe. Nje ukuba unamathele kwiqela lezi nkonzo, kwaye emva kokuphela kwexesha lokubhaliselwa mahala, uya kuqala ukubizwa ngokuzenzekelayo, kwaye, ngamaxabiso afana ne- $ 5 okanye i-10 yeedola, usenokungazikhathazi ngokonakalisa amanqaku akho aphezulu, uluhlu lokudlalwayo , okanye phakathi kwee-binges zexesha eliphakathi.
Ke, i-cheapo ye-iPhone SE 2020 eneprosesa yayo eya kuyigcina ifanelekile kangangeminyaka, sisiyobisi esifanelekileyo kwi-Apple & apos; ibhaluni ye-ecosystem yeenkonzo zobhaliso kwimultimedia. Ngoku khawufane ucinge ukuba iApple ibonelela ngokucocekileyo iphinda isonge zonke ezi nkonzo kwimali ephantsi yenyanga. Kuya kuba nzima ukuyichasa, kwaye isitya esiya kuyenza ukuba singenise imali sinokugcina njengeyona iphantsi ye-iPhone SE 2020 eyabhengezwa ngu-Apple ngenjongo yokufumana i-iOS kwizigidi ezininzi zezandla kunye neebhokhwe. Ucinga ntoni?
Thenga iApple iPhone SE (2020) kwi-Apple.com
Ungayibeka njani i-iPhone SE (2020)?
Ogqwesileyo! Akukho zikhalazo! Kulungile, kodwa ndinqwenela ukuba izinto ezimbalwa ezincinci zibe ngcono Umyinge! Akukho kubi, okanye kukhulu Kuyadanisa! Akwaba bekungcono Intlekele! Akukho khuphiswano ngokuchasene neentshaba ezikhoyoIziphumo zeVoti yokujongaOgqwesileyo! Akukho zikhalazo! 25.21% Kulungile, kodwa ndinqwenela ukuba izinto ezimbalwa ezincinci zibe ngcono 31.39% Umyinge! Akukho kubi, okanye kukhulu 20.41% Kuyadanisa! Akwaba bekungcono 12.4% Intlekele! Akukho khuphiswano ngokuchasene neentshaba ezikhoyo 10.59% Iivoti 4380
Ivenkile kaGoogle iyathengisa ngolwesiHlanu
I-iphone 11 pro vs i-samsung s20
Iiprinta eziphathwayo eziphambili zeefowuni ze-iPhone kunye ne-Android
Eyona mikhosi ilungileyo yokuThenga eMnyama ngoLwesihlanu omkhulu ngentengiso kaJulayi
Abalawuli abaphambili beBluetooth yokudlala i-Android
Nazi iiapos zendlela onokuchwetheza ngayo imibuzo yakho kunye nezicelo zakho kuSiri endaweni yokuthetha ngokuvakalayo
Idatha yendawo ethe nkqo yeefowuni ezingama-911 ezifunwayo kwi-AT & T, Verizon, kunye ne-T-Mobile yi-FCC
I-iPhone 11, 11 Pro, kunye ne-11 Pro Max zizaphulelo ze- $ 100 kwiMetro yiT-Mobile (yabathengi abatsha)
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab 3 7-intshi
Uhlaziyo lukaSnapchat longeza inqaku elitsha 'laMabali aqhelekileyo' kwi-Android nakwi-iOS
IGarmin kunye neapos; entsha yeVivoactive 3 yezemidlalo yewatchwatch ithatha iApple Watch kunye neSamsung Gear Sport
Ungayibuyisela njani kwakhona i-iPhone